MAXAA DHACAY? Su’aalo ka taagan booqashada MW Xasan Sheekh ee dalka Imaaraadka Carabta (Arrin yaab leh oo muuqata) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka MAXAA DHACAY? Su’aalo ka taagan booqashada MW Xasan Sheekh ee dalka Imaaraadka...
MAXAA DHACAY? Su’aalo ka taagan booqashada MW Xasan Sheekh ee dalka Imaaraadka Carabta (Arrin yaab leh oo muuqata)
(Abuu Dabeey) 21 Juun 2022 – Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa 19-kii Juun gaarey magaalada Abuu Dabeey ee caasimadda dalka Imaaraadka Carabta.
Sida lagu qoray The National oo kasoo baxa Imaaraadka, Sheikh Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, oo ah Wasiiru Dowle, iyo dhowr sarkaal kale oo Imaaraati ah, ayaa Gegada Abuu Dabeey uga hortegey MW Somalia.
Imaaraadka iyo DF Somalia ayaa labaduba isku raacay inay booqashada oo ahayd tii ugu horreeysey ee uu MW Xasan dibedda ku tago tan iyo markii uu xilka dib u helay 15-kii Maajo, ay tahay mid rasmi ah oo qaadanaysa 2 maalmood.
Yeelkeede, waxaa muuqanaysa arrimo ay su’aalo badani ka taagan yihiin:
1 – Maadaama ay booqashadu 2 maalmood ahayd waxay dow ah inuu ugu dambayn MW Xasan Sheekh maanta dib ugu soo laabto dalka.
2 – Degelka warbaahinta ee Villa Somalia maalintii uu baxay ayaa ugu dambaysey war uu leeyahay MW Somalia oo lagu soo qoro, xitaa inuu Imaaraadka tegey iyo sidii loosoo dhoweeyey laguma soo xarriiqin, war dambena warkii daa.
3 – Wax war ihi xitaa kama soo bixin dhanka Imaaraadka Carabta oo ku saabsan waxa ay kala hadlayaan MW Somalia, ajendaha laga hadlayo iyo wixii kasoo baxay, waana booqasho u qaab eg mid uu beryo dhexdeer ah Itoobiya iyo Eritrea uu keligii ku tegi jirey MW hore ee Farmaajo.
Arrimahan ayay haatan dadwaynuhu bilaabeen inay is waydiiyaan.
Previous articleXilliga la samaynayo Isku-aadka Horyaalka Talyaaniga ee fasalka 2022-23 oo la shaaciyey
Next articleIsrael, Ciidanka Cirka, Dhulka, Sirdoonka Millateriga & xitaa Mossad oo ka war helay APP sahlan oo lagu basaasayo